Hlola iGrisi - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseGrisi
Bukela ividiyo ekhuluma ngeGrisi
Hlola iGrisi, indawo ethatha isikhathi sonke samaholide unyaka wonke. Yini ukungathandi ngeGrisi.
IGrisi yizwe elitholakala ezimpambanweni zemigwaqo yaseYurophu, e-Asia nase-Afrika eningizimu naseningizimu mpumalanga yeYurophu enabantu abacishe babe yizigidi ezingama-12.
Athens inhlokodolobha yezwe nendawo okuya kuyo izinsuku ezingama-365.
IGrisi ine-11th ugu olude kakhulu emhlabeni ngobude, neziqhingi ezingaphezu kwe-2000, okuhlala kuzo i-220. Amaphesenti ayisishiyagalombili eGreek ayintaba.
IGrisi ithathwa njengendawo yokuzalwa kwempucuko yaseNtshonalanga, ukuthi unguyise wentando yeningi, izincwadi, ifilosofi, idrama, umuthi, isayensi, izibalo phakathi kwabanye nokugcina kodwa okungacishe kube yimidlalo yama-Olimpiki.
IGrisi yaziwa futhi ngokuphila kwayo kwasebusuku namabhishi, kusukela kusihlabathi esimnyama se Santorini ezindaweni zokungcebeleka zeqembu I-Mykonos. Abantu bacabanga iGrisi njengendawo yasehlobo, okuyiqiniso, kodwa futhi kuyisebusika.
Santorini wavotelwa njengo- "Isiqhingi Esihamba Phambili Emhlabeni" ku-Travel and Leisure.
I-Mykonos ufike ngolwesihlanu esigabeni sase-Europe.
Amaholide eGreece alungele wonke umuntu. Noma ngabe uthanda ilanga namabhishi, izikebhe zamanzi, umlando, imvelo, ukushushuluza, ukukhuphuka intaba eGrisi, impilo yasebusuku, igalofu noma nje ukuze uphumule, iGrisi inakho konke.
AmaGrikhi angabahloli bemvelo, ama-war (300 spartans) nabathengisi. U-Alexander omkhulu wanqoba iningi lomhlaba wasendulo ukusuka eGrisi kuye eNdiya.
Ngenxa yezimpi eziningi iGrisi yayibandakanyeka nendawo okuyo amasiko ayo athonywa. Lokho kukhombisa ekwakhiweni kwayo kwezakhiwo, impilo yansuku zonke, umculo, amasiko nazo zonke izinhlobo zobuciko.
Izindawo ze-Archaeological of Greece
IGrisi igcwele izikhumbuzo zeGrisi. Nomaphi lapho uya khona qiniseka ukuthi kukhona okuthile. Nje ukusho okumbalwa kwalokho kwaziwa kakhulu.
Ezempilo Nempilo ye-Wellness
Ngaphandle kwezindawo ezinqabile zomhlaba kanye nobuhle obukhethekile bemvelo, imvelo futhi yanikeza iziphethu zaseGrisi ngezakhi ezibalulekile zokwelapha ezazaziwa futhi zazisetshenziswa ngisho nasezikhathini zasendulo. Lokhu kutholakala ezindaweni eziningi ezahlukahlukene eGreece, futhi amanzi avela eziphethwini ezithile ahlukahluka ngenxa yokushisa okuphezulu, noma ukuba khona kwezinto ezingasebenzi kakhulu.
IGrisi ingelinye lamazwe acebile ezikhala zemvelo. Iziphethu ezishisayo nezinamaminerali zivela ezindaweni ezihlukile ze-850.
Ungaziqabula echibini phakathi kwamadwala, izimpophoma zemvelo kanye nezimila zasendle. Zizwe ukufudumala okufudumele kwamanzi (37⁰C) futhi uzizwe uzelwe kabusha.
Ukudla nokuphuza eGreece
Isiko lamaGrikhi ngesinye sezifanekiselo emhlabeni. Indawo yokuhlala komlando waseGrisi iqala kusuka kusengaphambili, futhi ngokuhamba kwesikhathi inokuthile okufanele ikwethule ngakho-ke ijabulisa ngempela umcabango.
IGrisi yindawo yokubukisa lapho amakhulu eminyaka, amathonya nokuphila kwansuku zonke kuhlangana khona.
Ukumbiwa kwezinto zakudala akuvimbi eGrisi. Izinsalela ezivela kwenye inkathi ziya ngokuya zikhanya futhi sithola ukuqonda okubanzi kokuvela komlando wezwe lamaGrikhi nakho konke okusha. Lokhu okutholakele kukhonjiswa kuminyuziyamu engenakubalwa cishe kuwo wonke amagumbi ezwe. Iminyuziyamu iyizinkumbulo nememori eGreece ifinyelela emuva esikhathini sangesikhathi.
IGrisi ineminyuziyamu engaphezulu kwe-100 yemivubukulo yemvelo ebonakalisa ingcebo yezwe yemivubukulo yezwe.
Zitholakala eduze kwezindawo zokumba futhi zigcina ubudlelwane bendawo phakathi kokutholwayo nezindawo zemivubukulo.
Okufanele ukwazi ngeGrisi
Kunezikhumulo zezindiza eziningi eGreece ezomhlaba kanye nezazwelonke.
Hlola iGrisi futhi uthandane nayo.
Ithempeli lika-Apollo Epicurius eBassae
Isiza Semivubukulo saseDelphi
Idolobha Lenkathi YaseRhodes
Izikhumbuzo ZasePaleochristian neByzantine zaseThessalonike
ISanhala of Asklepios e-Epidaurus
Isiza Sokuvubukula Kwe-Mystras
Isiza Sokuvubukula seOlympia
Izindela ezingama-Daphni, uHosios Loukas kanye no-Nea Moni waseChios
I-Pythagoreion ne-Heraion of Samos
Isizinda se-Arigological Archaeological of Aigai (igama lesimanje elithi Vergina)
Izindawo ze-Archaeological of Mycenae neTiryns
Isikhungo Somlando (iChorá) ngesigodlo sikaSanta-John umfundisi wezenkolo kanye nomkhonto we-Apocalypse esiqhingini sasePátmos
Idolobha Elidala laseCorfu
Indawo Yasendulo YaseFiliphi